Icehotel any Suède: Nahita ireo efitrano fizarana kanto roa vaovao ianao!
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Suède » Icehotel any Suède: Nahita ireo efitrano fizarana kanto roa vaovao ianao!
Suites art vaovao roa no nosokafana tao ICEHOTEL ao Jukkasjärvi. Miposaka tanteraka ny fahavaratra any Suède, saingy ao anatiny dia ririnina. Farafaharatsiny ao amin'ny ICEHOTEL ao Jukkasjärvi fa hatramin'ny Desambra 2016 dia manana ampahany maharitra amin'ny ranomandry sy lanezy, izay misokatra mandritra ny taona ary mihodina amin'ny herin'ny masoandro.
Ny ampahany maharitra amin'ny Icehotel dia feno zavakanto noforonina avy amin'ny ranomandry Arktika mazava, mifanohitra amin'ny maitso maitso any ivelany. Ny trano fandraisam-bahiny dia ahitana barazy ranomandry, galeraly misy ranomandry ary suite 20 misy ranomandry, sivy amin'izy ireo miaraka amin'ny sauna manokana ary miala sasatra, noforonin'ny mpanakanto avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Suites art vaovao roa no aseho ao amin'ny faritry ny ICEHOTEL mandritra ny taona. Iray amin'ireo suite vaovao ny Deluxe Suite izay misy sauna manokana sy efitrano fandraisam-bahiny mafana. Ny suite dia nomena anarana hoe "Very & Found" ary ny endrika ao amin'ilay suite dia miaraka amina mozika an-tsoratra manokana sy feon'ilay poeta sy mpitendry zavamaneno Petri "Bette" Tuominen.
Ny suite dia toerana iray ahafahan'ireo vahiny manao dia anatiny miaraka amin'ny famolavolana ny ranomandry, ny feo ary ny hazavana. Ankoatry ny farafara, ny seho mihaja dia misy seza ahafahan'ny vahiny mipetraka, mifantoka amin'ny sary vongana ary manomboka ny diany anatiny.
- Ny mpitsidika dia tarihina amin'ny tontolony anaty miaraka amin'ny fanampiana amin'ny feo, mozika ary feo. Ny efitrano, ranomandry ary famolavolana dia antsasaky ny zavatra niainana, fa ny antsasany kosa dia ny feo sy ny hazavana izay mifanerasera ary mitondra ny vahiny samirery, hoy i Jens Thoms Ivarsson.
Jens Thoms Ivarsson dia niara-niasa tamin'ny zavakanto ranomandry nandritra ny 15 taona mahery ary talen'ny famoronana tany ICEHOTEL teo aloha. Tamin'ity indray mitoraka ity dia fotoana hanandramana zava-baovao - atambatra mozika, feo, feo ary famolavolana.
- Fanamby iray ny fahazoana feo, hazavana ary endriny hifaneraserana, saingy faly izahay amin'ny vokatr'izany. Mahaliana ny maheno izay hevitry ny vahiny.
Ny mpanao sary sokitra sy ny mpamorona Javier Opazo avy any Chile dia namorona ilay kanto kanto hafa. Ny antsoina hoe "Téckara" dia midika hoe isa sivy ao Kunza (fiteny ampiasaina amin'ny Andes). Ny suite dia manana ny anarany satria mitazona andry sivy izay mampiseho ny haavon'ny valindrihana mahafinaritra.- Heveriko fa hahatsiaro ho tototry ny tsanganana avo manitatra hatrany amin'ny valindrihana ireo mpitsidika. Fihetseham-po mahafinaritra sy haavon'ny valindrihana 4,7 metatra hoy izy, Javier Opazo.
Fampirantiana sary sokitra vaovao
Fampirantiana zavakanto iray miaraka amina zavakanto sivy sy lanezy sivy hafa ihany koa no vita nandritra ny faran'ny herinandro tao amin'ny faritra manodidina ny Icehotel. Ny fampirantiana dia noforonina nandritra ny fiaraha-miory amin'ny ranomandry niaraka tamin'ireo mpanakanto nasaina avy amin'ny Association Sculptor Suède, notarihan'ny mpanakanto sy mpanao sary sokitra Lena Kriström izay 25 taona niainany tamin'ny fanaovana sokitra ranomandry.
- Faly izahay manolotra efitrano kanto roa vaovao misy endrika, fahatsapana ary famolavolana mahavariana, mitovy amin'ny fanokafana fampirantiana zavakanto vaovao mifantoka amin'ny sary sokitra miaraka amina sary kanto azo sary an-tsaina sy misintona. Mampiseho ny sakan'ny famolavolana ka hatramin'ny kanto izay anoloran'ny ICEHOTEL ireo vahiny, hoy ny Senior Advisor ao amin'ny ICEHOTEL Arne Bergh.
Nisokatra ny ICEHOTEL tamin'ny 1989 ary eo akaikin'ny hotely koa dia fampirantiana zavakanto misy zavakanto tsy miovaova amin'ny ranomandry sy lanezy. ICEHOTEL dia noforonina tamin'ny endriny vaovao isaky ny ririnina, vita tamin'ny ranomandry voajanahary avy amin'ny renirano Torne, iray amin'ireo renirano nasionaly any Sweden ary rano tsy voakitika farany. Rehefa niempo tao anaty renirano ny Icehotel tamin'ny ririnina tamin'ny lohataona dia nijanona ny ampahany amin'ny hotely; toerana ahafahan'ny mpitsidika miaina ny ranomandry sy lanezy mandavantaona.
Hawaii Convention Center: Aiza ny tombom-barotra?
Hamburg dia manatevin-daharana ny Initiative Urban Air Mobility Initiative